QM oo baaq deg-deg ah u dirtay Puntland iyo Jubbaland, ”waa niyad jab ka maqnaanshooda”! | HalQaran.com
Home Warar Cusub QM oo baaq deg-deg ah u dirtay Puntland iyo Jubbaland, ”waa niyad...
QM oo baaq deg-deg ah u dirtay Puntland iyo Jubbaland, ”waa niyad jab ka maqnaanshooda”!
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James swan ayaa ugu baaqay Maamullada Puntland iyo Jubbaland inay ka qeyb galaan Shirka magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug.
James swan ayaa sheegay in uu ka xun yahay ka maqnaanshaha labada maamul ee Shirka Dhuusamareeb.
“Sidaasi darteed, waxaan ka xunnahay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Madaxweynaha Jubaland Axmed Islaam (Axmed Madoobe) ka maqnaashahooda kulankan muhiimka ah. Waa wax laga xumaado in ay diideen ka qeybgalka shirkan iyadoo loo jeediyay codsiyo badan oo ka imaanaya Hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliyeed iyo bah wadaagta caalamka.‘‘
Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Khudbad uu u jeediyay Qaramada Midoobey ayuu mar kale ku celiyay in loo baahan yahay in Shirka Dhuusamareeb laga soo saaro go’aan Mideysan.
Ugu damebyn, waxaa magaalada Dhuusamareeb hadda ku sugan Madaxweynaha JF Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxda Saddex Maamul Goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, kuwaas oo halkaasi u tegay furitaanka Shirka wadatashiga Dhuusamareeb, balse waxaa ka qeyb galka Shirka Dhuusamareeb shuruud ku xiray Madaxda maamullada Puntland iyo Jubbaland.